Archive du 20191007
Depiote Todisoa Andriamampandry “Aoka tsy hifandrangitra intsony !”
Malagasy isika ka tokony hampiseho fihavanana sy fahendrena. Aoka tsy hifandrangitra intsony isika na ny an-daniny na ny an-kilany,
Veliranon’ingahy filoha Tsy misy ny fahagagana, 5 taona no hanatanterahana azy
Nanamafy ny filoha andry Rajoelina omaly fa efa 4000 ariary ny euro 1 izao, tsy afaka miala bala intsony ireo mpivarotra entana, hoy izy satria efa miha mahazo aina ny ariary.
Hajasoa Razanakoto Pascal Tena hampandroso an’Ambohimangakely
Vonona ny hampandroso ary hitondra ny kaominina Ambohimangakely ho any amin’ny tena fampandrosoana,
Arlette Ramaroson « Mety hiitatra io raharaha Tanamasoandro io »
Vao tamin’ny 28 septambra isika, hoy ny mpitsara iraisampirenena, Arlette Ramaroson no nankalaza ny andron’ny zo hahafantatra.
Misy tsy milamina e !
Tsy mbola nisy herintaona niasana kosa ve izy dia mimenomenona sahady ianareo ?
Mpitatitra nesorina teny Ambodivona “Tena voafitaka izahay…”
“Tena voafitaka tanteraka izahay”, hoy ireo kaoperativa nalana tetsy Ambodivona.
Aferana laza adina bakalorea Olona 18 nosamborina, mpianatra 64 hatao famotorana …
Nivoaka tamin’ny fahanginany ny sabotsy teo ny avy eo anivon’ny zandarimariam-pirenena manoloana ireo tsy fanarahan-dalàna niseho nandritra ny fanadinana Bakalôrea teo,
Besalampy Lasibatry ny tsy rariny ny renim-pianakaviana iray…
Renim-pianakaviana iray antsoina hoe : Soamiadana no lasibatr’ireo tompon’andraikitry ny dinabe tany Mahabe Ambonara, distrikan’i Besalampy Faritra Melaky efa-taona lasa izay. Nitaiza tovolahy iray antsoina hoe le pôta izy.
Tetikasa Tanamasoandro Niditra an-tsehatra ny SE-BTP
Nisy ny fivoriana sy ny fifanakalozana hijerena ny fiaraha-miasa amin’ny fanatanterahana ny tetikasa Tanamasoandro
Fiaraha-miasan’ny DHL sy SOS Villages d’enfants 5000 ireo tanora nizatra asa
10 taona lasa izay no nanombohan’ilay fandaharan’asa Gotech izay nanampiana ireo tanora niatomboka tany amin’ny SOS Village d’enfants.
Loza mahatsiravina tany Fianarantsoa Voasoroky ny fitsaram-bahoaka tamin’ilay mpamily
“Nifampiresaka ny tompona fiara sy ny zandary ka nalain’ny ekipan’ny zandary izay notarihin’ny komandan’ny kaompanian’i Matsiatra Ambony.
Paikadin’ny mpamaky trano Mody mangataka ireo vehivavy mpitsikilo entana sarobidy
Matihanina amin’ny famakiana trano ireo olon-dratsy any Manja.
Besarety Ny lakan-drano tsentsina no mahatonga ny tondra-drano
Ny lakan-drano tsentsina no mahatonga ny rano miakatra eny Besarety na dia amboarina aza ny lalana, hoy ireo mpanamboatra lalana eny an-toerana.